ဒူးနဲ့ တံတောငျဆဈ မဲနတောတှကေို သဘာဝအတိုငျး ဖယျရှားနိုငျမယျ့ နညျးလမျးမြား – One Daily Media
ဒူးနဲ့ တံတောငျဆဈ မဲနတောတှကေို သဘာဝအတိုငျး ဖယျရှားနိုငျမယျ့ နညျးလမျးမြား
နလေောငျခွငျး၊ ဆဲလျသတှေကွေောငျ့ အသားအရေ ကွမျးတမျးခွငျး၊ ဟျောမုနျး မမြှတခွငျးတို့ကွောငျ့ ဒူးနဲ့ တံတောငျဆဈတှမှော မညျးနိုငျပါတယျ။ ဒူးနဲ့ တံတောငျဆဈတှမှော အဆီဂလငျး မရှိတာကွောငျ့ မခွောကျသှအေ့ောငျ ထိနျးသိမျးပေးဖို့ လိုပါတယျ။
သခှားသီးမှာ ကွေးခြှတျတဲ့ အစှမျး ရှိတာကွောငျ့ ဒူးနဲ့ တံတောငျဆဈ တှမှော မညျးနတောကို ဖယျရှားပေးနိုငျ ပါတယျ။ သခှားသီးက ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပေးပွီး အသားအရကေို ရဓောတျ ပွညျ့စေ ပါတယျ။ ဗီတာမငျ A နဲ့ ဗီတာမငျ C ပါဝငျ တာကွောငျ့ အသားအရေ ကိုလညျး လှပစေ ပါတယျ။
– သခှားသီးပွားလေးတှကေို တံတောငျဆဈနဲ့ ဒူးမှာ 15 မိနဈ ကွာ ကပျထားပေးရ မှာပါ။ နောကျပွီးရငျတော့ ရအေေးနဲ့ဆေးလိုကျလို့ရပါပွီ။ သခှားသီးရညျနဲ့ သံပရိုသီးရညျကို ရောလိမျးပွီး မိနဈ 20 ကွာ ထားလို့လညျး ရပါတယျ။ နတေို့ငျးပွုလုပျပေးရငျ ဒူးနဲ့တံတောငျဆဈ မညျးတာတှေ ပြောကျသှားမှာပါ။
9. သံပရိုသီးနဲ့ မုနျ့ဖုတျဆိုဒါ
သံပရိုသီးက အသားအစကေို ဝငျးစပေါတယျ။ ဗီတာမငျ C ပါဝငျလို့ အသားအရကေို ထိနျးသိမျးပေးပါတယျ။ မုနျ့ဖုတျဆိုဒါက အသားအရကေို နူးညံ့စပွေီး အမညျးတှကေို ဖယျရှားပေးပါတယျ။
– သံပရိုသီးကို နှဈခွမျးခှဲပါ။
– သံပရိုသီးတဈခွမျးစီပျေါကို မုနျ့ဖုတျဆျောဒါတဈဇှနျးစီ တငျပါ။
– ဒူးနဲ့တံတောငျဆဈတှကေို 1 မိနဈကွာအောငျ ပှတျပေးပါ။
– 15 မိနဈကွာထားပွီးရငျ ရနှေေးနဲ့ဆေးပါ။
ဒီနညျးလေးကို နှဈရကျတဈကွိမျ ပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။
8. ရှားစောငျးလကျပတျနှငျ့ နှားနို့
ရှားစောငျးလကျပတျက အသားအရောငျကို ညီညာစပွေီး ရဓောတျဖွညျ့ပေးပါတယျ။ ဘကျတီးရီးယားနဲ့ မှိုတှကေိုလညျး တိုကျထုတျပေးပါတယျ။ ရှားစောငျးလကျပတျနဲ့ နှားနို့ကို ရောစပျလိုကျတဲ့ အခါ အသားအရကေ သဘာဝအတိုငျး ဝငျးသှားပါတယျ။
– ရှားစောငျးလကျပတျဂယျြနဲ့ နှားနို့ရောပွီး အရပွေားပျေါလိမျးပေးရမှာပါ။ တဈညခနျ့ထားပွီး မနကျရောကျရငျ ရဆေေးခလြိုကျလို့ရပါပွီ။ ရှားစောငျးလကျပတျအခှံကိုလညျး ဒူးနဲ့တံတောငျဆဈမှာ မိနဈ 20 ကွာကပျထားလို့ ရပါတယျ။
အာလူးက အသားအရကေို ဖွူစပေါတယျ။ အာလူးကို နတေို့ငျးအသုံးပွုရငျ အသားအရေ နူးညံ့လာပွီး မညျးနတောတှေ ပြောကျသှားမှာပါ။
– အာလူးကို အရညျညှဈပွီး အရပွေားပျေါလိမျးပေးပါ။
– 15 မိနဈကွာထားပွီး ရဆေေးခလြို့ရပါပွီ။
အာလူးပွားလေးတှကေို တံတောငျဆဈနဲ့ဒူးနရောမှာ 10 မိနဈ 15 မိနဈခနျ့ ကပျထားပေးလို့လညျး ရပါတယျ။
နနှငျးက တံတောငျဆဈနဲ့ ဒူးကအမညျးတှကေို ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမရှိဘဲ သဘာဝအတိုငျး ဖယျရှားပေးပါတယျ။
– နနှငျး စားပှဲတငျဇှနျးတဈဇှနျးကို နှားနို့နဲ့ရောပါ။
– ဒူးနဲ့တံတောငျဆဈကို လိမျးပေးပါ။
– ခွောကျသှသှေ့ားအောငျထားပွီး ရဆေေးခလြို့ ရပါပွီ။
နနှငျးနဲ့ နှားနို့ထဲမှာ ပြားရညျရောထညျ့ပွီး လိမျးပေးလို့လညျး ရပါတယျ။
အုနျးဆီမှာ ဗီတာမငျ E ပါဝငျလို့ ပကျြစီးနတေဲ့ အသားအရကေို ပွပွငျပေးပါတယျ။
– ရမေခြိုးခငျမှာ အုနျးဆီကို ဒူးနဲ့တံတောငျဆဈနရောမှာ လိမျးပေးပါ။
– အုနျးဆီစိမျ့ဝငျသှားအောငျ2မိနဈ3မိနဈခနျ့ နှိပျနယျပေးပါ။ အုနျးဆီထဲမှာ သံပရိုရညျ စားပှဲတငျဇှနျး2ဇှနျးထညျ့ပွီး လိမျးပေးလို့လညျး ရပါတယျ။
ပြားရညျက အသားအရကေို သဘာဝအတိုငျး ရဓောတျဖွညျ့ပေးပါတယျ။
– ပြားရညျစားပှဲတငျဇှနျး2ဇှနျး၊ သံပရိုရညျ စားပှဲတငျဇှနျးတဈဝကျ၊ မုနျ့ဖုတျဆျောဒါ စားပှဲတငျဇှနျးတဈဇှနျးကို ရောမှပေါ။
– ဒူးနဲ့တံတောငျဆဈနရောတှကေို လိမျးပေးပါ။
– မိနဈ 20 ၊ 30 ခနျ့ထားပွီးရငျ ရဆေေးခလြို့ရပါပွီ။
ပြားရညျထဲကို ရှားစောငျးလကျပတျဂယျြထညျ့ပွီး လိမျးလို့လညျး ရပါတယျ။
သံလှငျဆီနှငျ့သကွားက အိမျတှငျးဖွဈ ကွေးခြှတျဆေးတှပေါ။ သူတို့က အသားအရကေို ရဓောတျဖွညျ့ပေးပွီး ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပေးပါတယျ။
– သကွားနဲ့သံလှငျဆီကို ဆတူရောပါ။
– တံတောငျဆဈနဲ့ ဒူးကို5မိနဈကွာ နှိပျနယျပေးပါ။
တဈပတျတဈခါ နှိပျနယျပေးရငျ တံတောငျဆဈနဲ့ဒူးတှမှော မမညျးတော့ပါဘူး။ သံလှငျဆီနဲ့သကွားကို မကျြနှာကွေးခြှတျရာမှာလညျး သုံးလို့ရပါတယျ။
အုတျဂြုံမှုနျ့က ကနျြးမာရေးကို ကောငျးစရေုံသာမက အနာအဆာကငျးတဲ့ အသားအရေ အတှကျလညျး အကြိုးရှိစပေါတယျ။ သံပရိုရညျ လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဝကျ၊ အုတျဂြုံမှုနျ့ လကျဖကျရညျဇှနျးတဈဝကျ၊ ဆား5ဂရမျတို့ကို ရောပွီး ဒူးနဲ့ တံတောငျဆဈမှာ 10 မိနဈ 15 မိနဈကွာအောငျ လိမျးပေးပါ။
– နောကျပွီးရငျ ရနှေေးနဲ့ ဆေးခလြို့ရပါပွီ။
– တဈပတျကို3ခါ၊4ခါ ပွုလုပျပေးလို့ ရပါတယျ။
အုတျဂြုံမှုနျ့ လကျဖကျရညျဇှနျးနှဈဇှနျးနဲ့ နှားနို့လကျဖကျရညျ ဇှနျးနှဈဇှနျးကို ရောပွီးတော့လညျး လိမျးပေးလို့ ရပါတယျ။
1. ရှာလကာရညျနှငျ့ ဒိနျခဉျြ
ရှာလကာရညျမှာ ပါဝငျတဲ့ အကျဆီးတဈအကျဆဈနဲ့ ဒိနျခဉျြမှာ ပါဝငျတဲ့ လကျတဈ အကျဆဈက ဒူးနဲ့ တံတောငျဆဈက အမညျးတှကေို ဖယျရှားပေးပါတယျ။
– ဒိနျခဉျြလကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျး၊ ပနျးသီး ရှာလကာရညျ လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဇှနျး တို့ကို ရောမှပွေီး ဒူးနဲ့ တံတောငျဆဈ နရောတှကေို လိမျးပေးပါ။
– 15 မိနဈကွာ ထားပွီး ရဆေေးခလြိုကျရငျတော့ ဒူးနဲ့တံတောငျဆဈက မညျးနတောတှေ ပြောကျသှားမှာပါ။
လှယျကူတဲ့ နညျးလမျးလေးတှနေဲ့ ဒူးနဲ့ တံတောငျဆဈ မညျးနတောကို ဖယျရှားလို့ရပါပွီ။
ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ် မဲနေတာတွေကို သဘာဝအတိုင်း ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
နေလောင်ခြင်း၊ ဆဲလ်သေတွေကြောင့် အသားအရေ ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ ဟော်မုန်း မမျှတခြင်းတို့ကြောင့် ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်တွေမှာ မည်းနိုင်ပါတယ်။ ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်တွေမှာ အဆီဂလင်း မရှိတာကြောင့် မခြောက်သွေ့အောင် ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။
သခွားသီးမှာ ကြေးချွတ်တဲ့ အစွမ်း ရှိတာကြောင့် ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ် တွေမှာ မည်းနေတာကို ဖယ်ရှားပေးနိုင် ပါတယ်။ သခွားသီးက ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို ရေဓာတ် ပြည့်စေ ပါတယ်။ ဗီတာမင် A နဲ့ ဗီတာမင် C ပါဝင် တာကြောင့် အသားအရေ ကိုလည်း လှပစေ ပါတယ်။
– သခွားသီးပြားလေးတွေကို တံတောင်ဆစ်နဲ့ ဒူးမှာ 15 မိနစ် ကြာ ကပ်ထားပေးရ မှာပါ။ နောက်ပြီးရင်တော့ ရေအေးနဲ့ဆေးလိုက်လို့ရပါပြီ။ သခွားသီးရည်နဲ့ သံပရိုသီးရည်ကို ရောလိမ်းပြီး မိနစ် 20 ကြာ ထားလို့လည်း ရပါတယ်။ နေ့တိုင်းပြုလုပ်ပေးရင် ဒူးနဲ့တံတောင်ဆစ်မည်းတာတွေ ပျောက်သွားမှာပါ။
9. သံပရိုသီးနဲ့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ
သံပရိုသီးက အသားအစေကို ဝင်းစေပါတယ်။ ဗီတာမင် C ပါဝင်လို့ အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက အသားအရေကို နူးညံ့စေပြီး အမည်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
– သံပရိုသီးကို နှစ်ခြမ်းခွဲပါ။
– သံပရိုသီးတစ်ခြမ်းစီပေါ်ကို မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါတစ်ဇွန်းစီ တင်ပါ။
– ဒူးနဲ့တံတောင်ဆစ်တွေကို 1 မိနစ်ကြာအောင် ပွတ်ပေးပါ။
– 15 မိနစ်ကြာထားပြီးရင် ရေနွေးနဲ့ဆေးပါ။
ဒီနည်းလေးကို နှစ်ရက်တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
8. ရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့် နွားနို့
ရှားစောင်းလက်ပတ်က အသားအရောင်ကို ညီညာစေပြီး ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ မှိုတွေကိုလည်း တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့ နွားနို့ကို ရောစပ်လိုက်တဲ့ အခါ အသားအရေက သဘာဝအတိုင်း ဝင်းသွားပါတယ်။
– ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်နဲ့ နွားနို့ရောပြီး အရေပြားပေါ်လိမ်းပေးရမှာပါ။ တစ်ညခန့်ထားပြီး မနက်ရောက်ရင် ရေဆေးချလိုက်လို့ရပါပြီ။ ရှားစောင်းလက်ပတ်အခွံကိုလည်း ဒူးနဲ့တံတောင်ဆစ်မှာ မိနစ် 20 ကြာကပ်ထားလို့ ရပါတယ်။
အာလူးက အသားအရေကို ဖြူစေပါတယ်။ အာလူးကို နေ့တိုင်းအသုံးပြုရင် အသားအရေ နူးညံ့လာပြီး မည်းနေတာတွေ ပျောက်သွားမှာပါ။
– အာလူးကို အရည်ညှစ်ပြီး အရေပြားပေါ်လိမ်းပေးပါ။
– 15မိနစ်ကြာထားပြီး ရေဆေးချလို့ရပါပြီ။
အာလူးပြားလေးတွေကို တံတောင်ဆစ်နဲ့ဒူးနေရာမှာ 10 မိနစ်15 မိနစ်ခန့် ကပ်ထားပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
နနွင်းက တံတောင်ဆစ်နဲ့ ဒူးကအမည်းတွေကို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ သဘာဝအတိုင်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
– နနွင်း စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်းကို နွားနို့နဲ့ရောပါ။
– ဒူးနဲ့တံတောင်ဆစ်ကို လိမ်းပေးပါ။
– ခြောက်သွေ့သွားအောင်ထားပြီးရေဆေးချလို့ ရပါပြီ။
နနွင်းနဲ့ နွားနို့ထဲမှာ ပျားရည်ရောထည့်ပြီး လိမ်းပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
အုန်းဆီမှာ ဗီတာမင်Eပါဝင်လို့ ပျက်စီးနေတဲ့ အသားအရေကို ပြပြင်ပေးပါတယ်။
– ရေမချိုးခင်မှာ အုန်းဆီကို ဒူးနဲ့တံတောင်ဆစ်နေရာမှာ လိမ်းပေးပါ။
– အုန်းဆီစိမ့်ဝင်သွားအောင်2မိနစ်3မိနစ်ခန့် နှိပ်နယ်ပေးပါ။ အုန်းဆီထဲမှာ သံပရိုရည် စားပွဲတင်ဇွန်း2ဇွန်းထည့်ပြီး လိမ်းပေးလို့လည်း ရပါတယ်။
ပျားရည်က အသားအရေကို သဘာဝအတိုင်း ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပါတယ်။
– ပျားရည်စားပွဲတင်ဇွန်း2ဇွန်း၊ သံပရိုရည် စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဝက်၊ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်းကို ရောမွှေပါ။
– ဒူးနဲ့တံတောင်ဆစ်နေရာတွေကို လိမ်းပေးပါ။
– မိနစ် 20 ၊ 30 ခန့်ထားပြီးရင် ရေဆေးချလို့ရပါပြီ။
ပျားရည်ထဲကို ရှားစောင်းလက်ပတ်ဂျယ်ထည့်ပြီး လိမ်းလို့လည်း ရပါတယ်။
သံလွင်ဆီနှင့်သကြားက အိမ်တွင်းဖြစ် ကြေးချွတ်ဆေးတွေပါ။ သူတို့က အသားအရေကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
– သကြားနဲ့သံလွင်ဆီကို ဆတူရောပါ။
– တံတောင်ဆစ်နဲ့ ဒူးကို5မိနစ်ကြာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။
တစ်ပတ်တစ်ခါ နှိပ်နယ်ပေးရင် တံတောင်ဆစ်နဲ့ဒူးတွေမှာ မမည်းတော့ပါဘူး။ သံလွင်ဆီနဲ့သကြားကို မျက်နှာကြေးချွတ်ရာမှာလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
အုတ်ဂျုံမှုန့်က ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေရုံသာမက အနာအဆာကင်းတဲ့ အသားအရေ အတွက်လည်း အကျိုးရှိစေပါတယ်။ သံပရိုရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်၊ အုတ်ဂျုံမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်၊ ဆား5ဂရမ်တို့ကို ရောပြီး ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်မှာ 10 မိနစ် 15 မိနစ်ကြာအောင် လိမ်းပေးပါ။
– နောက်ပြီးရင် ရေနွေးနဲ့ ဆေးချလို့ရပါပြီ။
– တစ်ပတ်ကို3ခါ၊4ခါ ပြုလုပ်ပေးလို့ ရပါတယ်။
အုတ်ဂျုံမှုန့်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှစ်ဇွန်းနဲ့ နွားနို့လက်ဖက်ရည် ဇွန်းနှစ်ဇွန်းကို ရောပြီးတော့လည်း လိမ်းပေးလို့ ရပါတယ်။
1. ရှာလကာရည်နှင့် ဒိန်ချဉ်
ရှာလကာရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ အက်ဆီးတစ်အက်ဆစ်နဲ့ ဒိန်ချဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ လက်တစ် အက်ဆစ်က ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်က အမည်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
– ဒိန်ချဉ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ပန်းသီး ရှာလကာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း တို့ကို ရောမွှေပြီး ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ် နေရာတွေကို လိမ်းပေးပါ။
– 15 မိနစ်ကြာ ထားပြီး ရေဆေးချလိုက်ရင်တော့ ဒူးနဲ့တံတောင်ဆစ်က မည်းနေတာတွေ ပျောက်သွားမှာပါ။
လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ် မည်းနေတာကို ဖယ်ရှားလို့ရပါပြီ။